Himalaya Dainik » उदयपुरमा स्कारपियाे दुर्घटना हुँदा ५ को मृत्यु, ३ जना गम्भीर घाइते
उदयपुरमा स्कारपियाे दुर्घटना हुँदा ५ को मृत्यु, ३ जना गम्भीर घाइते
उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१४ भदौरे भीरमा शनिबार राती स्कारपिओ दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
कटारी नगरपालिकाको वडा नं. १४ भदौरे भीरमा भैरहवाबाट ओखलढुंगातर्फ जाँदै गरेको बा.२० च ७१७१ नम्बरको स्कारपियो दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यलय कटारी जनाएको छ ।
‘भैरहवाबाट ओखलढुङ्ग्गा आउने व्याक्तिका परिवारहरुलाई जानकारी गराइएको छ, उहाँहरु कटारी आउँदै हुनुहुन्छ कटारी आएपछि अन्य तीन जनाको समेत पहिचान खुल्नेछ,’
स्कारपियो राति १२ बजे दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा मृत्यु भएकामध्ये तीन जनाको पहिचान खुलेको छैन । मृतकमध्ये ओखलढुंगा मानेभञ्ज्याङ–९ का ३० वर्षीय रामबहादुर सार्की र २६ वर्षीय कर्मी सार्कीको मात्र पहिचान खुलेको छ । बाँकीको बारेमा सोधखोज भइरहेको ईलाका प्रहरी कार्यलय कटारीका प्रमुख (डिसपी) हेमन्त भण्डारी क्षेत्रले बताए ।
दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकामध्ये अन्दाजी ३०/३२ वर्षका पुरुष, ३०/३५ वर्षका पुरुष र अर्की ३०/३५ वर्षकी महिलाको पहिचान भइनसकेको उनले बताए। पहिचान नखुलेका तीनै जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो।
पहिचान नखुलेका तीनै जनाको घटनास्थलमै ज्या न ग एको हो । अहिले मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि कटारी अस्पताल ल्याइँदै गरेको डिसपी भण्डारीले बताए । दुर्घटनामा परेको गाडी भने घटनास्थलमै रहेको छ ।
दुर्घटनामा ओखलढुंगाको मानेभञ्याङ–९ की २८ वर्षीय कुमारी सार्की, २२ वर्षीया कल्पना सार्की र चालक रुपन्देही त्रिगम्वा नगरपालिका–४ का २८ वर्षीय पनव खड्का गम्भीर घाइते छन् । उनीहरुलाई कटारी अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको छ । कल्पनाको टाउको र शरीरमा चोट लागेको छ भने कुमारीको दाहिने खुट्टामा गहिरो चोट लागेको छ ।
प्रहरीले राति ब्रेक फेल भएर स्कोरपियाे दुर्घ टना भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । गाडी सडकबाट करिब ९ सय मिटर तल खसेको छ । उनीहरु सबै जना भारतबाट दशैँ मान्नका लागि घरतर्फ आउने क्रममा भैरहवा क्वारेन्टाइनमा बसेर गाडी रिजर्भ गरी गएको बुझिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । मृतकको शव ईलाका प्रहरी कार्यलय कटारीको टोली, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा शव निकालिएको थियो ।
के तपाईलाई याै नसाथी फेर्न मनलग्छ ? लागेको हुनसक्छ यस्तो रोग !
स्कारपिओ दुर्घटना : पाँच जनाको मृत्यु, तीन घाइते